Indlu enkulu yanamhlanje eneTub eshushu, (-Istudiyo seFlora) - I-Airbnb
Indlu enkulu yanamhlanje eneTub eshushu, (-Istudiyo seFlora)
Hermanus, Western Cape, eMzantsi Afrika
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMarita & Esti
UMarita & Esti yi-Superhost
Indlu entle enelanga esanda kulungiswa enendawo ethandekayo yangaphandle enebhafu eshushu elungele ukwamkela iindwendwe zeeholide. Le ndlu yokulala i-1 emangalisayo eneplani enkulu evulekileyo yokuhlambela kunye ne-loo eyahlukileyo, lala iindwendwe ezi-2. Ifakwe ngokupheleleyo ikhitshi yesicwangciso esivulekileyo, igumbi lokuphumla kunye negumbi lokutyela. Indawo engaphandle enefenitshala yegadi etofotofo kunye nezixhobo zebraai. Igumbi lokuphumla kunye negumbi lokulala lifakelwe izifudumezi ze-biofuel. I-cottage yi-1.2 km ukusuka kumbindi wedolophu kunye neendawo zokutyela. Ukuhamba ngokulula kwe-1.5 km ukusuka kwiindledlana zamawa.
I-cottage ibucala ngokupheleleyo kwaye ivulekile kwaye ivule iingcango zokupakisha ukuya kwi-tub eshushu. Indawo enkulu yebraai ngaphandle enefenitshala ekhululekileyo yangaphandle. Ngeentsuku ezibandayo kukho izifudumezi ezimbini zebhayoloji enye kwigumbi lokulala nenye kwigumbi lokuphumla.
I-TV ene-intambo yepremiyamu, I-Netflix
I-Hermanus edumileyo yendlela yeliwa yindlela elula yokuhamba nge-1.3km ukusuka kwindlwana. Umbindi wedolophu kunye neeresityu ziku-1.2km kude- 15min ukuhamba okanye 3min drive drive.
Umbuki zindwendwe ngu- Marita & Esti
Izimvo eziyi-1 653
Siyakuthanda ukudibana nondwendwe lwethu kwaye sibaxelele konke malunga nedolophu yethu ekhethekileyo kunye nepropathi kodwa ngamaxesha e-covid sinikezela ngokujonga ukhuseleko lomntu wonke sihlala sikhona.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hermanus